वाइड बडीका विषयमा सदनमा बोलेनन् प्रधानमन्त्री ओली, आखिर किन डराए ? «
वाइड बडीका विषयमा सदनमा बोलेनन् प्रधानमन्त्री ओली, आखिर किन डराए ?
काठमाडौँ, २२ पुस । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वाइड बडी विमान खरीदलगातका विषयमा संसदलाई जवाफ नदिएको भन्दै सांसद गगनकुमार थापाले विरोध जनाउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्र विकासका लागि हातेमालो गरेर अघि बढ्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल काङ्ग्रेसलगायत सबैलाई आह्वान गर्नुभएको छ ।
सम्बोधनको पूर्ण विवरण :
जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म १७ हजार घर निर्माण भइ हस्तान्तरण गरिसकिएको छ । हाल ३८ हजार ८ सय ८० वटा घर निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । रासस